के हो मास्क माउथर ? ६ लक्षण र रोकथामका उपाय - Tulsipur Online
Posted by News Desk | ६ असार २०७८, आईतवार १५:१७ |
डा. रीपु सिंह खनाल
आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको सुरक्षाका निम्ति सचेत हामी सम्पूर्णमा, मास्कको प्रयोग यति नियमित बन्यो कि मास्क अब हाम्रा लागि अभिन्न वस्तुु भइसकेको छ। शरीरको सुरक्षाका लागि कपडाको प्रयोग गरिए जस्तै माक्सको प्रयोग पनि अनिवार्य बन्दै गएको छ। मास्कको यही नियमित प्रयोगले हामीलाई भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट केही सुरक्षा प्रदान गरे पनि यसका केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा भरखरै मात्र प्रकाशित विभिन्न लेखरचना तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको मास्क माउथु शब्दले हामी सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मास्क माउथका प्रमुख लक्षणहरु
यो एक लक्षण मात्र नभइ आफैंमा विभिन्न समस्याको संकेत पनि हो। यसका विभिन्न कारणहरुमध्ये शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु ९डिहाइड्रेसन० पनि एक हो। थुकले दाँत तथा मुखलाई ओसिलो पारिराख्ने तथा हानीकारक किटाणुबाट सुरक्षा दिने गर्दछ। मुख भित्र प्रयाप्त थुक नभएमा मुख सुख्खा भई विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छन्। जस्तै दन्त सडन, ढुसी (फंगल इन्फेक्सन), स्वासको दुर्गन्ध, गिजा सुन्निने , मुखमा घाउ आउने इत्यादि।
फर्मेन्टेबल कार्वोहाइड्रेटकोको नियमित सेवन, मुखको सफाईमा अनियमितताका संगसंगै मास्कको प्रयोगबाट हुने मुखको सुख्खपनले दाँतमा एसिड बनाउने ब्याक्टेरिया ९क्तभउतयअयअअगक mगतबलक, ीबअतयदबअष्ििष्० बढ्न मद्दत गर्दछ। यसले दन्त सडन तथा यससँग सम्बन्धित जटिलताहरुलाई पनि निम्त्याउँदछ।
५) Candidal Infection
मुखमा थुकको मात्रा कम हुँदा यसले मुखको पर्यावरणलाई परिवर्तन गर्ने गर्दछ। जसका कारण मुखमा ऋबलमष्मब जस्ता ढुसीको संक्रमण पनि हुन सक्दछ।
माक्स माउथका संभावित कारणहरु
मास्क माउथको रोकथाम कसरी गर्ने ?
हामीमा मास्क माउथका लक्षणहरु देखा नै परे पनि कोबिड १९को संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग नगरी सुख्खै छैन। अझ भनौं कोभिड९१९ को सुरक्षाका लागि मास्क अनिवार्य जस्तै बनेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि यो एउटा प्रभावकारी विकल्प पनि हो। माक्स माउथ भैहाले पनि धेरै आतिनु पर्ने हुँदैन। समयमै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा उपचार अवस्य पनि गर्न सकिन्छ ।
१) प्रशस्त पानी पिउने जसले मुखलाई ओसिलो बनाई राख्दछ।
२) दाँत तथा मुखको नियमित सरसफाईमा ध्यान दिने।
– दिनको दुई पटक (बिहान–बेलुकी) फ्लोराइडयुक्त मञ्जन प्रयोग गरी सही तरिकाले दाँत माझ्ने,
– दिनमा कम्तिमा एक पटक डेण्टल फ्लस प्रयोग गरी दाँतहरुका बीचको भागमा सफा गर्ने,
– जिब्रोको राम्रो सफाई गर्ने जसका लागि तयलनगभ कअचबउभच अथवा ब्रसको पछाडिको भागलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,
– बारम्बार पानीले कुल्ला गरी मुख सफा राख्ने।
३) मुखको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति रक्सी जन्य पदार्थ नमिसाइएका mयगतज धबकज को प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।
४) चिनी रहित जाइलिटोल युक्त अजभधष्लन नगm को प्रयोगले पनि मुखमा पर्याप्त थुक बन्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ।
५) सफा मास्कको प्रयोग गर्ने तथा मास्कबाट सावधानी पूर्ण बिश्राम लिने:
निरन्तर मास्कको प्रयोगले स्वासप्रस्वासमा अप्ठेरो महसुस भएमा केही समयका लागि मुख खुला गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले बीच बीचमा कुनै सुरक्षित स्थानमा गएर सुरक्षित तरिकाले मास्क हटाई केही बेरको विश्राम वा ब्रेक लिन पनि सक्नु हुन्छ। तर यसो गर्दा सो स्थान र परिवेशको जोखिमका बारे भने सचेत हुन जरुरी छ।
६) पोषिला, रेसादार तथा भिटामिन सी युक्त खानेकुराहरुको सेवन गर्नु पर्दछ
७) सूर्ती जन्य तथा मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन
यसरी माक्स हाम्रो शरीरको अन्य कपडाहरु जस्तै जीवनको अभिन्न अंग नै बन्दै आएको छ। विभिन्न संक्रमणको सुरक्षाकवज जस्तै बन्दै गएको मास्कको प्रयोग संगसंगै शरीरमा विभिन्न समस्याहरु पनिदेखा परेका छन्। माक्सको उचित प्रयोग, मुखको सरसफाईमा विशेष ध्यान र केही सावधानी अपनाउन सकियो भने यसले सिर्जना गरेको माक्स माउथ जस्तो समस्याबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। (डा खनाल-एमडिएस, पेरियोडोन्टोलोजी एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजी) -स्वास्थ्यखबर
Previousदाङमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाइदै
Nextमृतक खत्रीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग